Hanambady vahiny na Brezila - firenena fototarazo fanandramana Bilaogy Internet club Te Hanambady
Hanambady vahiny na Brezila — firenena fototarazo fanandramana Bilaogy Internet club Te Hanambady
Sign ho maimaim-poana mini-mazava ho azy fa Yulia Sedlovoi izay nanambady mihoatra noho ny roa-polo ny vehivavy isan’andro: alohan’ny handeha ho any Brezila aho azo antoka fa Niagara falls no lehibe indrindra eto amin’izao tontolo izao. Hay izay ao amin’izao tontolo izao dia maro kokoa avo sy malalaka sy tsara tarehy ny riandrano. Ohatra, ny Iguazu latsaka tamin’ny sisin-tany ny Brezila sy Arzantina, izay roapolo metatra lava ary in-droa midadasika kokoa noho ny Amerika Avaratra io, izany hoe ny Cortical teo an-tendrombohitra ao Rio, goavana be sarivongan’i Kristy Mpamonjy (Moskoa) — iray amin’ireo maoderina»zava-Mahagaga izao tontolo izao». Jesosy dia nanaiky nandritra ny Rio, ny fiarovana ny tanàna sy ny mponina rehetra avy amin’ny fahoriana. Ny tendrombohitra Sugarloaf dia ny raharaham-barotra karatra Rio, ny malaza crystal ambony, avo efa-metatra, hita eo amin’ny fidirana ho any amin’ny Guanabara Helo-drano. Avy amin’ny fandinihana sehatra ny tendrombohitra ny tena mahagaga ny fomba fijeriny ny tanàna, ny Helo-drano, ny tendrombohitra, ny Nosy ao amin’ny ranomasimbe, Niteroi tetezana sy ny sarivongan’i Kristy. Na dia eo aza ny unearthly hatsaran-tarehy voajanahary, Rio de Janeiro — fahadimy ny mponina (izay, efa ho tapitrisa) mipetraka amin’ny faritra iva (tanànam). Mampatahotra nieritreritra — tany Rio momba izany tanàna. Faritra iva mitovy amin’ny ara-dalàna ny trano fonenana tsy mba be raha ny fahitàna azy (na dia eo ivelany dia, mazava ho azy, koa — matetika izy ireo no nanao avy amin’ireo korontam-fitaovana), nefa raha ny marina — ny mponina no tsy mandoa hetra ny governemanta sy ny tsy mandoa jiro faktiora. Ireny olona ireny hiaina araka ny fitsipiky:»isika tsy nandray na inona na inona ny ny fanjakana, sy ny hanaovantsika ny fanjakana dia tsy ilaina». Voalohany, araka ny lalàna, naorina ny trano tsy afaka ny ho rava, na raha tsy izany dia miorina amin’ny ny Valan-javaboarim-pirenena. Noho izany, tsy ara-dalàna ny trano natsangana na dia tsara akaikin’ny -kintana trano fandraisam-bahiny na akaikin’ny tora-pasika mahafinaritra any Brezila dia tsy nandrava. Faharoa, raha toa ka toerana iray manaporofo bebe kokoa noho ny efa-polo ny fianakaviana, mba tsy mahasalama ka mahatonga ny toe-piainana, ny fanjakana mihazona azy ireo ny herinaratra, ny rano ary ny hafa fitaovam-pandraisana. Fahatelo, ny reny mandray telo-polo dolara isam-bolana ho an’ny ankizy tsirairay izay mandeha tsy tapaka any an-tsekoly (toy izany koa ny governemanta mifehy ny sehatra fanabeazana). Na dia eo aza ny zava-misy fa ny mpizaha tany no matahotra ny robberies no nataon’ireo mponina amin’ny faritra iva, araka ny mpitari-dalana, ny mpanao heloka bevava atao ihany ny mponina. Na izany aza, vao haingana ny mpitandro ny filaminana hita amin’ny faritra iva, izay mandray ny zava-mahadomelina avy ao Kolombia, ary mizara azy amin’ny hafa faritra iva Ao Rio mahasoa mba hivarotra zava-mahadomelina, toy ny mpizaha tany izy dia nahay. Tsy ela akory izay, ny fanjakana dia niezaka ny hanaitra ny andian-jiolahy ao amin’ny faritra iva sy niangavy ny mponina amin’ny vidiny ambany dia ambany-trano, fa izy nanofa nivoaka ny trano izy ary niverina ny»maimaim-poana»- trano. Ny governemanta no tsy mahalala ny fomba hamahana ity olana ity. Raha ao Ekoatera momba ny valo ambin’ny folo ny foko, samy foko manana ny fitafiana, ny fiteny, sy eo amin’ny voarara mifangaro ny fanambadiana, raha ao Brezila misy fanavakavaham-bolon-koditra mihitsy.
Eto velona ny Creoles, metisy, mulattoes, ary misy mihitsy aza mihoatra ny karazana mampifangaro. Matetika ny fianakaviana no teraka fotsy hoditra mainty zaza, toy ny lehibe-renibeny na ny lehibe-dadabe dia mainty. Raha nijery ny tantara mitohy Breziliana»ny Andevo Isaura», ao amin’ny andian-dahatsoratra ity ny fihetseham-po ny olona nafindra tany brand ny marina, ary ny fiainana toe-javatra loatra. Ny mpitari-dalana taminay ny tantara momba ny ahoana no mponina ao an-toerana beat teo amoron-dranomasina ny mpilalao izay nilalao tao amin’ny andian-dahatsoratra ity colonizer Leontii, noho izy tsy te-hanambady Izaura. Raha ny mpilalao tamin’izany fotoana eo amin’ny fiainana tena izy dia nanambady. Breziliana ny olona — ny fihetseham-po, dia kely tsotra loatra ny olona mitomany rehefa fivoriana tsirairay, ary tsy manafina ny ranomasony. Breziliana olona tia sipa fotsy amin’ny masony ny hazavana. Ny vehivavy tsara ny hatsaran-tarehy dia ny hoe kely Nono sy ny lehibe Breziliana boriky. Nahita zazavavy tsara tarehy, handro azy amin’ny mampamangy.
Mahatoky izy ireo, lehilahy sy lehibe ny ray
Lehilahy manambady any mahatsiaro tena faha — efa-polo taona. Ny tovovavy hanambady rehefa dimy amby telo-polo taona. Brezila — ny lehibe indrindra amin’ny Katolika firenena eto amin’izao tontolo izao, sy ny rehetra ny fampakaram-bady eto dia miaraka amin’ny fampakaram-bady. Ny fanambadiana ao amin’ity firenena ity dia tena mafy, vitsy ny fisaraham-panambadiana, nandao ny ankizy, no. Ao Brezila ny fanalan-jaza dia voarara, ary raha ny ankizivavy mahazo bevohoka, ny lehilahy manambady azy ho azo antoka. Misy mihevitra fa lehilahy Breziliana ny tsara indrindra ny ray eo amin’izao tontolo izao. Ny ambony indrindra ny fandoavana ny asa ao Brezila (karama), ny miaramila, ny mpitsabo sy ny mpahay lalàna. Ny Breziliana dia tsy miady amin’ny olona, ka ho miaramila azo antoka sy malaza. Fa ny miaramila raha toa ka misy zavatra mitranga, ny karamany mandra-pahatapitry ny ainy mba handoavana ny vadiny na ny zanany vavy. Ny tovovavy eto aho dia efa nanana harena lehibe hanambady ny miaramila ny olona.
Ny olona any Brezila velona eo ho eo ny taona
Ny zokiolona no tsy manan-kilema, maro na dia teo amin’ny faha-manohy mamorona. Eto ny faha-dimy amby enim-polo taona no taonan ny famoronana ny fitomboana. Niakatra ny sarivongana i Kristy, nahatsapa tena aho malahelo ny korontana amin’ny fanatanterahana ny asa. Ary dia niakatra ny hevitra avy ny fotoana ny fotoana mba handray ny lahatsary fanadihadiana malaza ny olona momba ny fomba sy ny toerana kokoa ny hihaona, toy ny malala vehivavy afaka manome aingam-panahy ny olona mba ho lehibe ny zava-bita, sy ny fomba mba hanorina fifandraisana mirindra ao amin ny fianakaviana. Hello
← Hatsaran'ny avy any Brezila: ny fifantenana ny sary
Ny endri-javatra ny ny Breziliana ny olona →